कोरोनाले मुलुकै सखाप पार्न सक्ने विज्ञको चेतावनी, सरकारको काम देखेर गगन थापा लज्जित - Birgunj Sanjalकोरोनाले मुलुकै सखाप पार्न सक्ने विज्ञको चेतावनी, सरकारको काम देखेर गगन थापा लज्जित - Birgunj Sanjalकोरोनाले मुलुकै सखाप पार्न सक्ने विज्ञको चेतावनी, सरकारको काम देखेर गगन थापा लज्जित - Birgunj Sanjal
कोरोनाले मुलुकै सखाप पार्न सक्ने विज्ञको चेतावनी, सरकारको काम देखेर गगन थापा लज्जित
६ जेष्ठ २०७७, मंगलवार ०९:०६
काठमाडौँ | नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढ्न थालेपछि आम नागरिकहरुमा त्रास बढ्दै गएको छ । लकडाउन जारी रहेका बेला समेत कोरोना भाइरसको फैलावट रोकिन नसक्दा महामारीको खतरा बढ्न थालेपछि नागरिकहरुमा त्रास छाएको हो । हालसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण दुईजनाको मृत्यु भएको छ भने ३५७ जनामा संक्रमण फैलिएको सरकारले औपचारिक जानकारी दिएको छ ।
सरकारले भारतबाट स्वदेश फर्केकाहरुको परीक्षणमा ध्यान नदिँदा संक्रमणले खतरनाक रुप धारण गर्न थालेको विज्ञहरुले बताएका छन् । डा. समिरमणि दीक्षितले भारतबाट फर्केकाहरुलाई सीमा नाकामा नाम ठेनागा मात्रै टिपेर घर पठाईपछि अहिले कोरोना सक्रमणले भयावह रुप लिन थालेको बताउनुभयो । उहाँले कोरोनाले नेपालमा महामारीको रुप धारण गरे मुलुक सखापै हुने चेतावनी दिनुभयो । स्वास्थ्यका हिसाबले अति सम्पन्न मुलुकहरु पनि कोरोना सामू हायल कायल भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा महामारी फैलिए अवस्था निकै नै दयनीय हुनेतर्फ सरकार सचेत रहनुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले कुनै हालतमा पनि कोरोना संक्रमणलाई महामारीको रुप धारण गर्न नदिने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने डा. दीक्षितको सुझाव छ । त्यसका लागि सीमा नाकाहरु पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुपर्ने, लकडाउनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने र परीक्षणको दायरा भयानक रुपमा बढाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । डा. दीक्षितले देशव्यापी रुपमा परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
यता घरभित्रै थुनिएका आम नागरिकहरु कोरोना त्रासले छटपटाउन थालेका बेला सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको आलोचना गरेको छ । कांग्रेस सासद गगन थापाले कोरोना रोकथामका लागि तत्काल र दृघकालका लागि गर्नुपर्ने कामहरुमा सरकार नराम्रोसँग चुकेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सीमामा अलपत्र परेका नागरिकको साबधानीपूर्वक उद्धार गर्न नसक्ने सरकारले लुटिएका भूमि फिर्ता ल्याने रटान लगाइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । थापाले कोरोना संकटको यो बेला सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आफूलाई लज्जित पारेको बताउनुभयो ।
तर सत्तापक्ष भने कोरोना भाइरसको रोमथाममा सरकारबाट भएको कमजोरी स्वीकार्न कुनै हालतमा तयार छैन । सांसद तथा सत्तारुढ दल नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको चुनौतीमा अल्झिएर बस्ने नभई त्यसलाई सुझबुझ, साहस र वस्तुनिष्ठ योजनाका साथ सामना गर्ने, आर्थिक, सामाजिक जीवनलाई गतिशील बनाउने, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्याय हासिल गर्ने र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्पका साथ प्रस्तुत भएको जिकिर गर्नुभयो ।
सरकारले सुरुमा नेपालमा कोरोना भाइरस भित्रिनै नदिने दाबी ग¥यो । कोरोना नभएको देश भनेर पर्यटक तान्ने भन्दै लज्जापद घोाषणा पनि ग¥यो । संक्रमण भित्रिएपछि स्थानीय संक्रमण फैलन नदिने घोषणा पनि ग¥यो । स्थानीय संक्रमण पनि भएपछि समुदाय स्तरमा फैलिन नदिएको दाबी सरकारले गरिरह्यो । जब समुदायस्तरमा पनि संक्रमण फैलियो सरकारले कुनै पनि व्यक्तिको कोरोनाका कारण ज्यान गुम्न नदिएको भन्दै डम्फु बजाइरह्यो । तर लकडाउन घोषणालाई मात्रै कोरोना रोकथामको प्रभावकारी कदम ठानेको सरकारले कोरोना संक्रमण मुलुकभर भुसको आगोझैँ फैलिसकेको तथ्य बुझ्न सकिरहेको छैन । हाललाई मुलुकमा दुईजनाको मात्रै मृत्यु भएका छ यो सामान्य हो भन्ने ठानियो भने स्थिति युरोप र अमेरिकाको जस्तै बन्न समय लाग्ने छैन ।